Composable: Manome amin'ny fampanantenanao manokana | Martech Zone
Talata, Aprily 20, 2021 Talata, Aprily 20, 2021 Jason Cottrell
Tsy nahomby ny fampanantenanao manokana. Nandritra ny taona maro dia nandre momba ny tombony azo tsapain-tànana isika, ary ny mpivarotra mitady ny hanararaotra azy dia nividy vahaolana lafo vidy sy sarotra ara-teknika, nefa tara loatra vao mahita fa, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fampanantenan'ny olona manokana dia kely fotsiny noho ny setroka sy fitaratra.
Ny olana dia manomboka amin'ny fomba fahitana ny personalization. Napetraka ho vahaolana amin'ny orinasa, namboarina tamin'ny alàlan'ny mason-tsivana hamahana ny filan'ny orinasa raha ny momba azy manokana (raha toa ka miharihary izany, satria izy io). Ny fampidirana ny anaran'ny olona voalohany amin'ny mailaka dia tsy manome izay ilainy. Tsy manaraka ny filan'izy ireo ny fanarahana azy ireo amin'ny Internet miaraka amina doka ho an'ny zavatra iray nojereny tao amin'ny tranokalanao. Fanamboarana ny atin'ny pejy fitorianao afaka manompoa ny filan'izy ireo, fa tsy hoe raha ny rafitra manohana azy dia manana lavaka angona sy fitantanana votoaty tsy dia mahomby, ny olana iraisana manohana ny maro amin'ireo personalization dia manafintohina ireo orinasa.
Ny tsirairay amin'ireto fomba fiasa ireto dia toy ny marketing marketing nomerika mitovy amin'ny fetsy parlor mora vidy, ary tsy vitan'ny mahita azy ireo fotsiny ny mpanjifanao, dia sosotra amin'izy ireo. Saingy misy izao tontolo izao izay ananan'ireo traikefa namboarina tamina angon-drakitra manome lanja fanampiny ho an'ny mpanjifa, manampy azy ireo hahita, hikaroka ary hividy ny entany mora amin'ny fantsona mifanaraka aminy indrindra.
Matetika loatra, ny marika dia mirotsaka amin'ny paikadim-panafody alohan'ny hahatongavany amin'ny fahombiazana. Ny nofinofy mamirapiratra amin'ny harona lehibe kokoa sy ny mpamerina mamerina dia mamela zava-misy masiaka: tsy misy fomba mavesatra amin'ny angon-drakitra sy ny mari-trano niomerika izay afaka manohana ireo traikefa omnichannel voahidy, nofinofy sisa no hisy. Saingy tsy tokony hatao toa izao. Ny personalization dia mety hahomby.
Ka ahoana no ahafahantsika mifindra amin'ny traikefa iray izay mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho tsy miraharaha (faran'izay tsara) ho iray izay mampifandray azy ireo amin'ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny fotoana sy ny fomba itadiavany izany? Miaraka amin'ny fitambarana haitao sy paikady mety.
Ataovy ny asanao data
Voalohany ary ilaina indrindra, ny orinasa dia mila mandamina ny angon-drakitra. Mariho fa tsy nilaza aho mpivarotra mila mandamina ny angon-drakitra ataon'izy ireo fa ny orinasa iray manontolo. Mpivarotra maro no manana angona madio sy voarindra. Toy izany koa ho an'ny mpamorona vokatra, ekipa marika, ary ny fizarana tsirairay amin'ny fikambanana manana fidirana amin'ny sombin-data manokana.
Ny zavatra iainan'ny mpanjifa ihany no tsy miaina anaty silo kely milamina sy milamina; mitranga isaky ny ambaratonga sy amin'ny fotoana rehetra izany. Lalao adala ny fiandrasana fahitana momba ny fampielezan-kevitra amin'ny famerenana mamantatra ny zava-drehetra momba ny mpanjifa. Mba hiasa ny personalization dia mila aorina manodidina ny traikefa iray manontolo izy io, fa tsy sombin-javatra iray monja.
Midika izany fa ny orinasanao dia mila mahazo fomba fijery tokana ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra. Sehatra ho an'ny mpanjifa (CDPs) dia tsara ho an'ity, ary mpiara-miasa matoky toa azy Myplanet afaka manampy anao hamantatra izay CDP sahaza indrindra amin'ny zavatra ilainao ary manampy anao amin'ny fampiharana azy. Amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ireo data data an'ny departemantanao dia hanomboka hanana fomba fijery feno momba ny tena toetran'ny mpanjifanao ianao, manomboka amin'ny farany ka hatramin'ny farany. Ny personalization ankehitriny dia mifanakalo tantara amin'ny mpanjifa mitetika, fa ny zava-misy dia mahalana no mahitsy.
Ianao koa dia mila manamafy ny angon-drakitra misy anao ((RTD) fampiharana. Miaraka amin'ny RTD, ho azonao antoka ny fanatsarana ny traikefa — ny fiantohana ny fampahalalana momba ny vokatra dia havaozina ary ny asan'ny fikarohana dia manao izay farany vitany — saingy ampahany manandanja amin'ny fananganana fomba fanatontosana ny mombamomba azy io. Ny hetsiky ny mpanjifa ao amin'ny fantsona iray dia tokony ho afaka hamorona fanehoan-kevitry ny marika amin'ny fantsona rehetra, ao anatin'izany ny iray izay nisy azy ireo, ary ny RTD ihany no ahafahana manao izany.
Ny fitondrana angon-drakitra fanampiny momba ny indostria dia afaka manampy anao hanana traikefa lavitra kokoa. Ny fomba fijery ara-barotra manodidina ny teny fikarohana dia afaka manampy amin'ny famaritana tsy ireo teny mahazatra indrindra ampiasain'ny mpanjifanao mba hahitana vokatra tadiavina fa koa teny mifameno izay ampifandraisin'izy ireo amin'ireo vokatra, izay ho azo ampiasaina rehefa vonona ny hanamboatra traikefa amin'ny tolo-kevitry ny vokatra ianao. .
Ary farany, tena zava-dehibe ny fampifantohana ny angona momba ny vokatrao. Mba hiantohana ny traikefa ananan'ny mpanjifa amin'ny Internet mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'izy ireo, amin'ny fampiharana, amin'ny fampiasana kioska mitokana, miresaka amin'i Alexa, na ny endrika endrika hafa mety hifaneraseran'ny marikao amin'ny mpihaino anao dia mila manana ianao ny tsirairay amin'ireo takelaka misy ifandraisany amin'ny foibe data. Averina indray, rehefa afaka vonona handamina ny dia ataon'ny mpanjifa ianao, ny angon-drakitra mifanaraka dia ho vodin'ireto traikefa ireto.
Ataovy maodely izany
Ny fampiasana tahiry mahomby dia hanampy amin'ny fanandramana traikefa tsara, fa ny fampandehanana ny angon-drakitra araka izay farany tsara indrindra ary hahazoana antoka fa manome traikefa mandondona isaky ny fantsona ianao, dia tokony handinika ny fanaparitahana ny zavatra niainanao. Ny maritrano tsy misy lohany (mampihena ny traikefanao avy any amin'ny lamina any aoriana) dia tsy natao ho an'ny rehetra, fa ho an'ny maro kosa ny maodely maodely no safidy tsara indrindra hanarahana ny tahan'ny fiovan'ny teknolojia.
Raha tsy misy ny haitao farany tsara indrindra ahafahan'ny ampahany tsirairay amin'ny zavatra niainana dia mety ho sarotra ny mitondra an'io traikefa io amin'ny ambaratonga manaraka miaraka amin'ny orkestra. Mba hanatsarana ny dia ataon'ny mpanjifa avy amin'ny fifanakalozan-dresaka nifanaovan'izy ireo tamin'ny marikao, amin'ny traikefa an-tserasera izay ahafantaran'izy ireo bebe kokoa momba ny vokatrao, ary farany amin'ny fividianana rindrambaiko dia sarotra be raha toa ka miverina miasa monolithic ianao. -mendaha izay tsy milalao tsara amin'ny hafa.
Composable amin'ny Myplanet manolotra rafitra maodely izay ahafahanao manararaotra indrindra ny traikefa ecommerce anao. Manararaotra lamina ecommerce voaporofo sy teknolojia kilasy tsara indrindra, Composable dia manome fitaovana anao hamoronana vahaolana omnichannel tena izy izay afaka miaina mifanaraka amin'ny fampanantenanao manokana: angon-drakitra mifandraika tanteraka hanampy anao hamaritra ny atiny tadiavin'ny mpanjifanao; fitantanana votoaty marefo ahafahanao mandefa an'io votoaty io amin'ny sehatra mpihaino mety; ary fototra maritrano modular hitombo miaraka amin'ny orinasanao, mampifanaraka ny fahafahan'ny tsena vaovao rehefa mipoitra izy ireo.
Monoliths dia manana ny toerany, ary raha mifanitsy amin'ny filanao tonga lafatra ny fanolorany dia ho tsara endrika ianao. Saingy rehefa mivoatra ny tontolo dia sarotra be ny mahita ny fomba vahaolana monolithic hanohy hanome izay rehetra ilain'ny marika hahomby, ary hanolotra azy amin'ny ambaratonga avo indrindra misy eny an-tsena. Ny fahaizana misafidy sy misafidy vahaolana miaraka amina rafitra maodely dia midika hoe rehefa misy zavatra miova ho an'ny orinasanao — endrika endrika vaovao tianao hidirana, fantsona vaovao ilainao ho anisan'ny — afaka miova arak'izany ny teknolojia manohana ny orinasanao.
Topazo maso ny fiakaran'ny tsena tao anatin'ny 2-3 taona lasa. Ny tsena dia afaka manolotra tombam-bidiny tena izy ho an'ny mpanjifa. Ny mpivarotra dia afaka mahazo ny zavatra rehetra ilainy amin'ny toerana iray ary, ho tambiny fanampiny, dia mety hahazo isa tsy mivadika na hitahiry ny vidin'ny fandefasana amin'ny fotoana iray. Fanampin'izay, manokatra fotoana izy ireo amin'ny zavatra toy ny tolo-kevitra momba ny vokatra mifameno izay mety hanatsara ny traikefan'ny vokatra na hanatsorana kokoa ny traikefany amin'ny fiantsenana, sady manome lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa. Ny tombotsoan'ny orinasa amin'ity haitao ity dia miorim-paka ao amin'ny tombotsoan'ny mpanjifa ary mampifandray mivantana amin'ny fomba manokana mahomby — misy ny antony nikatsoan'ny tsena tato ho ato.
Saingy ny fanandramana hitondra vahaolana eny an-tsena amin'ny sehatra efa nisy dia mety ho fanamby. Izay haitao vaovao rehetra dia handray asa hahitsy, fa ny fampidirana haitao vaovao ho lasa ekôlôjika misy azy dia mety tsy ho vita mihitsy. Ny vahaolana rehetra dia misy asa sy fotoana ary vola tafiditra amin'izany. Ny fahafaha-mihetsika atolotry ny fomba maodely sy tsara indrindra dia midika fa mandritra izany fotoana izany sy ny asa ary ny vola dia tsy ho very maina rehefa mila manamboatra mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ianao.
Ny fanaingoana manokana dia mbola tsy nahatratra ny saritaka hatreto, saingy afaka. Mila matsilo kokoa momba ny fampiasantsika ny haitao mamela azy isika. Mila mametraka fototra matanjaka amin'ny fampiasana angona isika satria io dia mamaritra ny lafiny rehetra amin'ny personalization, ary mila miantoka ny mari-trano iankinanay mba hanohanana fomba manokana hanohana azy io. Ny tena zava-dehibe dia mila mifantoka amin'ny paikadin'ny mpampiasa izahay. Izay paikadim-panaingoana manokana izay mametraka ny tadiavin'ny orinasa alohan'ny ilain'ny mpampiasa dia vonona ny ho lavo sy tsy hahomby.
Mangataha Demo azo ovaina
Tags: cdpmifangaroSehatra ho an'ny mpanjifaecommercepersonalization ecommercemyplanetomnichannelpersonalizationtetikady manokanaangon-drakitra tena izyPersonalization amin'ny fotoana tena izyrtd
Jason Cottrell dia mpanorina sy CEO an'ny Myplanet, studio famolavolana rindrambaiko manampahaizana manokana amin'ny famoronana sehatra traikefa nomerika ho an'ireo mpivarotra omnichannel, orinasa ecommerce, telecom, fivarotana ary marika hafa manerantany.